IMozilla yethula iFirefox Lockbox umphathi wayo we-cross-platform | Kusuka kuLinux
Abadali besiphequluli sewebhu seFirefox babeka eyabo i-spin kwi-software yokuphatha iphasiwedi, ukuqalisa uhlelo olusha oluhlose ukusiza abasebenzisi bedivayisi ye-Android ukuthola ukufinyelela okubanzi kokungena ngemvume okuvele kubalandele ngama-akhawunti abo weFirefox.
IMozilla imemezele ngokusemthethweni ukukhishwa kwemenenja yephasiwedi yeFirefox Lockbox yeplatifomu ye-Android, esetholakalela abasebenzisi be-Android ukuyilanda.
Umphathi we-password uqobo kuyiphrojekthi yokulinga yesiphequluli seFirefox, eqala ngokusemthethweni uma ukuhlolwa kuphelile futhi kunganyamalali uma ukuhlolwa kwephrojekthi sekuqediwe.
Okusha IFirefox Lockbox ihlobene ngqo nalokho umsebenzisi akugcina usuku lonke ngaphakathi kwesiphequluli sakhe, okusho ukuthi "akukho ukucushwa okwengeziwe okudingekayo," ngokusho kwebhulogi le-Mozilla.
"Kukhona imenenja ye-password yakudala efana ne-LastPass noma i-1Password kusistimu yayo yemvelo, edinga ukuthi abasebenzisi bayigcwalise ngolwazi ngesandla noma ngezinto ezifana nezandiso zesiphequluli."
1 Mayelana neFirefox Lockbox
2 Izici zeFirefox Lockbox
3 Ungayithola kanjani iFirefox Lockbox?
Mayelana neFirefox Lockbox
Ngokuya ngezici, IFirefox Lockbox akuyona imenenja ephelele yephasiwedi, ngoba idatha ivumelaniswe kakhulu nenguqulo yedeskithophu yeFirefox.
Njengoba uhlelo luvumelanisa wonke amaphasiwedi akhona amawebhusayithi ahlukene umsebenzisi awalondoloze kusiphequluli sabo seFirefox ibanikeza ukufinyelela lapho kudingeka. Ngaphezu kwalokho, iphinde inikeze amandla okugcwalisa ngokuzenzakalela amaphasiwedi lapho uhlangabezana nanoma yiluphi uhlobo.
Lapho umsebenzisi angena ku-akhawunti yeFirefox kudeskithophu noma kunguqulo yeselula yesiphequluli seFirefox, iphasiwedi yefomu ingena ngokuzenzakalela bese idatha yedatha ibethelwa.
UMozilla uthe iFirefox Lockbox ingeyabasebenzisi abafuna ukwenza ngcono ukuphepha kwe-akhawunti, kepha abanaso isikhathi esanele sokudlulisa imininingwane kumphathi wephasiwedi.
Inzuzo yokusebenzisa iFirefox Lockbox ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokukhohlwa iphasiwedi yakho, ikakhulukazi uma bakhohlwa iphasiwedi ohlangothini lweselula.
Isibonelo, uma ungene kwiwebhusayithi futhi ungakwazi ukukhumbula iphasiwedi yakho, vele uvule i-akhawunti yakho yokusesha ye-Firefox Lockbox bese ukopisha iphasiwedi yakho ukuze uyiqedele.
Ngasikhathi sinye, awudingi ukukhathazeka ngomunye umuntu ontshontsha ifoni yakho ukuthola iphasiwedi yakho., kusukela lapho ufaka iFirefox Lockbox kudinga ukuqinisekiswa okuphephile ukuqinisekisa ukuphepha kwedatha yomsebenzisi.
Izici zeFirefox Lockbox
Uhlelo lokusebenza lwe-Firefox Lockbox password manager ivumela abasebenzisi ukuthi bagcine ngokuphepha amaphasiwedi, asevele agcinwe kusiphequluli seMozilla Firefox.
Noma lokhu kuhle Kukhona nokubuyela emuva njengoba kungavumeli abasebenzisi ukuthi bangeze amaphasiwedi amasha noma basuse akhona.
Nge ukuphela kokuphela kokubethela okungama-256-bit, uhlelo lokusebenza lwe-Lockbox luvumela abasebenzisi ukuthi bakwazi ukuthola amaphasiwedi abo kalula. Ingabe isekela ukuqedela okuzenzakalelayo Igcina abasebenzisi inkinga yokuthayipha kabusha yonke imininingwane nokungena ngemvume kalula, okwenza inqubo ibe mfushane.
Kuzingxenyekazi ze-iOS ne-Android, iFirefox Lockbox isekela ukuqinisekiswa kweminwe noma ukuqashelwa kobuso ukuqinisekisa ukuphepha nokuqinisekiswa okusheshayo nokuvikelekile.
Ngaphandle kwalokho, nawe unenketho yokusetha isibali sikhathi esizenzakalelayo isikhathi esithile, ngemuva kwalokho uhlelo lokusebenza luzoshayeka.
Okunye kokusebenza okwengeziwe okutholakala kuhlelo lokusebenza kufaka ukuthepha okukodwa ukukopisha igama lomsebenzisi nephasiwedi, ukumisa isiphequluli ukuvula iwebhusayithi, nokuningi okumbalwa.
Ungayithola kanjani iFirefox Lockbox?
Si Ngabe unentshisekelo yokuzama i-Firefox Lockbox?, ungalanda uhlelo lokusebenza kwesinye sezixhumanisi ezilandelayo.
Okwalabo Abasebenzisi be-Android, isicelo yilokhu.
Okwalabo Abasebenzisi be-iOS uhlelo lokusebenza lohlelo lwakho Ingabe lokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IMozilla yethula iFirefox Lockbox umphathi wayo we-cross-platform password
I-Kubernetes 1.14 itholakala ku-Canonical